Georgetown | Akụkọ Njem
Foto | Christopher Anderson Wikimedia Commons
Ebube Georgetown kewapụrụ n'etiti etiti Washington na ọtụtụ afọ ọ bụ ebe obibi nke ndị nnọchi anya gọọmentị na ndị mmadụ na-arụ ọrụ na gọọmentị mana, n'ihi isi nso ya na isi obodo na mmụba nke ọnụọgụgụ mmadụ, ọ mechara bụrụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa agbata obi na isi obodo.
Ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo dị n'akụkụ Glover Park, dị nso na Dupont Circle na Foggy Bottom bụ mpaghara Georgetown. Ejiri ya n'okporo ámá ya jupụtara na ya, ihe owuwu ya site na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX na maka njikọta nke ochie na nke ọhụrụ. Okporo ámá jupụtara na ndụ ma ikuku dị ezigbo mma.
Ntọala na Osimiri Potomac na 1751, obodo Georgetown bu ụzọ guzobe Washington, bụrụ otu n'ime obodo kachasị na Maryland ruo mgbe etinye ya na District nke Columbia. Ya mere, agbata obi a nwere akụkọ ihe mere eme na-atọ ụtọ ị nwere ike ịmụ site na ịgagharị n'okporo ámá ya, na-atụgharị uche ọmarịcha ụlọ ndị Georgia mara mma na ụlọ ndị nwere brik.
Na ịgagharị gị na agbata obi gị, ị nwere ike ịga na Georgetown Visitor Center na Thomas Jefferson Street iji jide map ma chọpụta na oge ezumike gị, ma ọ bụ mee njem nlegharị anya n'efu n'ehihie n'oge ọkọchị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-amata ụlọ kacha ochie na Washington, Old Stone Houde, nke malitere na 1765 na onye ọdịdị ya agbanwebeghị. Ọ bụ ugbu a ụlọ ngosi ihe nka ọha na eze nke nwere ime ụlọ mara mma n'ụdị gọọmentị nke ndị otu etiti.
Nleta ọzọ bara uru bụ City Tavern Club, ebe ndị nna ntọala nke United States na-erikarị nri.: George Washington, Thomas Jefferson na John Adams.
Ọzọkwa Tudor Place House na Ogige, oghere nke onye ikwu George Washington nwere ebe ị nwere ike ịhụ ihe karịrị nka 8.000 na nka na arịa ụlọ site na narị afọ nke XNUMX wee gafere hectare abụọ nke ubi mara mma.
Ebe ọzọ enwere mmasị ileta Georgetown bụ Custom House na Post Office, otu n'ime ụlọ post ọfịs mbụ a ga-ewu na United States.
Foto | Marjord Wikimedia Commons
Ebe dị anya site na etiti ndị ọbịa bụ Chesapeake na Osimiri Ohayo (C&O) nke Osimiri Potomac, nke jikọtara obodo Washington DC na Cumberland (Maryland) n’agbata 1831 na 1924. E wuru ya ka ọ na-ebuga coal, osisi na ngwaahịa ndị ọzọ. dị ka ụzọ ọzọ na Potomac, nke na-agba ọsọ na canal. Greatzọ dị mma iji mata ọwa mmiri bụ ịnyịnya ígwè iji nwee ọmarịcha ọwa mmiri, mkpọchi ụlọ na igwe igwe.
N'aka nke ọzọ, ihe dị ka kilomita atọ site na etiti Washington bụ Mahadum Georgetown, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Katọlik kacha ochie na United States nke hibere na 1789.
Na mgbakwunye na ọtụtụ nke akụkọ ihe mere eme, Georgetown bụkwa nnukwu ebe maka ịzụ ahịa na ịnụ ụtọ nri dị mma n'ụlọ ahịa na ụlọ nri pụrụ iche, ọkachasị n'okporo ámá Wisconsin na M. Ọ bụghị ihe ọhụụ ịhụ ndị egwu n'okporo ámá na egwuregwu n'èzí.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịga na ogige ọdụ osimiri Georgetown maka nri izu ike mgbe ị na-ele Osimiri Potomac anya.
Maka nri ihunanya n’ebe pụrụ iche, nwalee 1789 talọ oriri na ọtaụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ historicụ historicụ akụkọ ihe mere eme n'okporo ụzọ Georgetown dị jụụ, ma ọ bụ nwaa ndị ọrụ ugbo, ndị ọkụ azụ, ndị na-eme achịcha, ụlọ oriri na ọ waterụ waterụ mmiri mmiri na-elekwasị anya na nkwado. N'ime ọnwa na-ekpo ọkụ n'afọ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ atụ na Georgetown Waterfront niile na-ewe iwe, na-enye oche n'èzí nwere nnukwu echiche nke Osimiri Potomac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Georgetown